Man United Oo 4-0 Kuxasuuqday QPR +SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man United Oo 4-0 Kuxasuuqday QPR +SAWIRO
Man United ayaa garoonkeeda Old Trafford ku xasuuqday kooxda heerka labaad ka soo laabatay ee QPR, Man United ayaa guushan ku gaadhay goolal ka kala yimid Di Maria, Herrera, Rooney iyo Mata , Man united ayaana ku badisay 4:0.
Tababaraha cusub ee Man United ee Van Gaal ayaa ugu danbayn farxad ku dareemay garoonka riyada ee Old Trafford kadib markii ay kooxdiisu guusheedii ugu horaysay ee horyaalka ay ka gaadhay kooxda QPR oo marti u ahayd. Van Gaal ayaa ugu danbayn ku soo laabtay shaxdii qadiimiga ahayd ee Man United ee 4-4-2 .
Van Gaal ayaa lineupkiisa ku soo daray afar saxiix oo cusub kuwaas oo kala ah Ander Herrera, Angel Di Maria, Daley Blind iyo Marcos Rojo.Man United ayay ka go’nayd inay kulankan guul gaadho kadib markii ay saddexdii kulan ee hore aysan midna guulaysan. waxa kale oo kursiga kaydka Man united ka mid ahaa Luke Shaw iyo Falcao oo iyaguna ka mid ahaa saxiixyada cusub ee xaagan.
Man United ayaa ciyaarta dardar kooxgaleh ku soo gashay, waxayna markiiba bilawday inay fursado badan abuurto. Angel Di Maria ayaa muujiyay inuu u qalmo lacagta badan ee ay Man united xagaagan kula soo wareegtay kadib markii uu noqday ciyaartoyga dhibaatada badan ku abuurayay kooxda martida ah.
Di Maria ayaa kooxda Man united hogaanka u dhiibay daqiiqadii 24 aad ee qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii uu meel 35 yard u jirta goolka QPR kubbad uu ka soo tuuray si toos ah u gashay goolka QPR. Di Maria yaana sidaa ku dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Man united, waxayna ciyaartu naqotay 1:0 ay Man united hogaanka ku qabtay.
Markale ayay daqiiqadii 36 aad ayuu Ander Herrera hogaanka u dheereeyay Red Devils isagoo kubad uu ka helay Rooney si xoogleh ugu darbeeyay goolka QPR, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Man united kalsoonida ku soo ceshatay.
Man United oo aanu weerarkeedu kala joogsi lahay ayay daqiiadii 44 aad ee dhamaadii qaybtii hore ee ciyaarta uu Rooney u dhaliyay goolka saddexaad, wuxuuna markiis kubbad fiican ka helay Ander Herrera oo uu isna markii hore ka caawiyay goolka labaad. Ciyaarta ayaa noqotay 3:0 ay Man united hogaanka ku raaxaysanayso. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3:0 ay Man United ku hogaaminayso.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay QPR isku daydya inay boodhka iska tunto laakiin Man United ayaan u ogolaan inay madax kor u qaadaan. Daqiiqadii 58 aad ee qaybtii danbe ee ciyaarta ayuu markale Di Maria kubad layaableh meel fog uga soo tuulay Juan Mata kaas oo isna si degan u ulmariyay goolhaye Green. ciyaarta ayaana noqotay 4:0 nasiif ah oo ay Man united ku raaxaysanaysay.
Jamaahiirt Man united ayaa ku raaxaystay kubbada quruxda badan ee ay xudunta u ahaayeen Di Maria, Herrera iyo Mata oo ahaa saddexda ciyaartoy ee ugu dhaqdhaqaadha badnaa Man United.Jamaariita United oo inbadan sugaayay in Falcao badal ciyaarta ku soo galo ayaa daqiiqadii 67 aad mar qudha sawaxan iyo qaylo isla oogsaday markaas oo uu Falcao ciyaarta badal ku soo galay, iyadoo lagu soo badalay Juan Mata. Van Persie ayaan kulan kan wax saamayn ah ku lahayn wuxuuna ka ahaa maqane jooga. Ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 4:0 ay Man United ku guulaysatay.